Mibvunzo Mitatu Yakachinja Upenyu Hwangu | Bhaibheri Rinochinja Upenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Yakataurwa naDoris Eldred
GORE ROKUBEREKWA: 1949
NHOROONDO YOUPENYU: AIDA KUZIVA CHINANGWA CHOUPENYU
Ndakakurira kuAncram, guta duku riri kuchamhembe kweNew York, U.S.A. Muguta iri maiva nemapurazi akawanda aichengetwa mombe dzemukaka. Maitova nemombe dzakawanda kupfuura vanhu.
Muguta iri maiva nechechi imwe chete uye ndiyo yataipinda semhuri. Musi weSvondo wega wega mangwanani, sekuru vangu vaishainisa bhutsu dzangu, ndotora kaBhaibheri kachena kandakapiwa naambuya vangu ndoenda kuSunday school. Ini nevatevedzani vangu taidzidziswa kushanda nesimba, kuremekedza nekubatsirawo vavakidzani uye kutenda makomborero ataiwana.
Pandakanga ndakura, ndakanogara ndega ndikatanga kushanda somudzidzisi. Ndaiva nemibvunzo yakawanda pamusoro paMwari uye upenyu. Vamwe vana vandaidzidzisa vaigona chaizvo. Vamwe vaisanyanya havo kugona asi vaishanda nesimba. Vamwe vainge vakaremara, ukuwo vamwe vaiva neutano. Ndainetseka kuti sei zvakadaro. Dzimwe nguva vabereki vevana vaisagona kuchikoro kana kuti vakaremara vaitaura mashoko akadai seekuti, “Kuda kwaMwari kuti mwana wangu ave seizvi.” Zvaindinetsa kuti sei Mwari aibvumira kuti vamwe vana vaberekwe vakadaro. Apa mwana wacho anenge asina chaakatadza.
Mumwe mubvunzo waindinetsa ndewekuti, ‘Ndechipi chinhu chine musoro chandinofanira kuita muupenyu?’ Ndainyatsoona kuti nguva iri kufamba. Ndakaberekerwa mumhuri yakanaka, ndikadzidza kuzvikoro zvakanaka, uye ndakanga ndava kushanda basa randaida. Asi upenyu hwangu hwaiita sekuti hapana kwahuri kuenda. Ndaingotarisira kuzoroorwa, ndova nemba yakanaka, vana, uye ndoramba ndichishanda kusvikira ndaenda pamudyandigere, ndozonogara kuimba inochengetwa vakwegura. Ndainetseka kuti ndizvo zvega zvatinoraramira here.
Rimwe gore ini nevamwe vadzidzisi takatenderera munyika dzemuEurope munguva yechirimo. Takaenda kuchechi yeWestminster Abbey, yeNotre-Dame de Paris, nekuVatican uyewo kumamwe machechi madiki akawanda. Kwese kwandaienda ndaibvunza mibvunzo yangu. Pandakadzoka kumba kwangu kuSloatsburg, iri muNew York ndakaendawo kune mamwe machechi. Asi hapana akandipa mhinduro dzinogutsa.
Rimwe zuva, mumwe mwana wandaidzidzisa aiva nemakore 12, akandibvunza mibvunzo mitatu. Mubvunzo wekutanga waiva wekuti ndaizviziva here kuti aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Ndikati hongu. Wechipiri waiva wekuti ndingada here kuziva zvakawanda nezveZvapupu zvaJehovha. Ndakapindura zvakare kuti hongu. Wechitatu, akandibvunza kwandaigara. Pandakamuudza, takabva taona kuti taigara munharaunda imwe chete. Handina kumboziva kuti mibvunzo mitatu iyoyo yandakabvunzwa nekamusikana ikako yaizochinja upenyu hwangu zvachose.
Akachovha bhasikoro rake akauya kumba, akatanga kudzidza neni Bhaibheri. Ndakamubvunza mibvunzo yandakanga ndambobvunza vafundisi vakawanda. Kusiyana nevafundisi ivavo, akandiratidza mhinduro dzakajeka uye dzinogutsa kubva muBhaibheri rangu chairo, mhinduro dzandakanga ndisati ndamboona!
Zvandakadzidza kubva muBhaibheri zvakandifadza uye zvakaita kuti ndigutsikane. Ndakabayiwa mwoyo nerugwaro rwa1 Johani 5:19 urwo rwunoti: “Nyika yose iri musimba reakaipa.” Zvakandifadza kudzidza kuti haasi Mwari anokonzera kutambura kwatinoona asi ndiSatani, uye kuti Mwari achazvigadzirisa. (Zvakazarurwa 21:3, 4) Ndakaona kuti Bhaibheri rinonzwisisika kana rikatsanangurwa zviri nyore. Kunyange zvazvo Chapupu chaindidzidzisa chaingova nemakore 12 chete, ndakaona kuti chokwadi hachichinji pasinei nokuti ndiani ari kuchitaura.
Kunyange zvakadaro, ndaiva neshungu dzokuda kuona kuti Zvapupu zvinotevedzera here zvazvinodzidzisa. Somuenzaniso, kasikana aka kaigara kachitaura kuti vaKristu vechokwadi vane mwoyo murefu nemutsa. (VaGaratiya 5:22, 23) Saka ndaida kumboona kana aiita zvaakandiudza izvi. Rimwe zuva ndakatononoka hangu kuchidzidzo chedu ndichitoziva. Ndaiti nechemumwoyo: ‘Achandimirira here? Kana akandimirira, achatsamwa here kuti ndanonoka kusvika?’ Pandakasvika ndakamuona akandimirira pamusuo, kumba kwangu. Akamhanyira kumota yangu ndokuti: “Ndanga ndava kuda kutoenda kumba kunoudza mhamha vangu kuti vafonere kuzvipatara kana kumapurisa kuti vanzwe kana paine zvaitika kwamuri, nokuti hamusati mambononoka seizvi. Ndanga ndava kutonetseka!”
Mumwe musi ndakamubvunza mubvunzo wandaifunga kuti mwana ane makore 12 haangambogoni kuupindura. Ndaida kuona kana aizongopindura zvemumusoro make. Pandakamubvunza, akanyatsonditarisa ndokuti: “Mubvunzo wamandibvunza wakaoma. Ndichaunyora pasi ndonobvunza vabereki vangu.” Paakazouyazve kuti tizoita chidzidzo chedu, akauya neNharireyomurindi yaiva nemhinduro yemubvunzo wangu. Saka ndakatanga kufarira Zvapupu nokuti mabhuku avo aipindura mibvunzo yangu yose kubva muBhaibheri. Ndakaramba ndichidzidziswa Bhaibheri nekamusikana ikako uye pashure pegore ndakabhabhatidzwa kuti ndive mumwe weZvapupu zvaJehovha. *
Pandakawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo yangu, ndaida kudziudza munhu wese. (Mateu 12:35) Pakutanga vanhu vemumhuri mangu vaindishora nemhaka yezvandakanga ndava kutenda. Asi vakazochinja nokufamba kwenguva. Amai vangu vakazofa vava kudzidza Bhaibheri. Kunyange zvazvo vakafa vasati vabhabhatidzwa, ndine chokwadi chokuti vakanga vasarudza kushumira Jehovha.
Muna 1978 ndakaroorwa neChapupu chainzi Elias Kazan. Muna 1981 ini naElias takakokwa kuti tinoshanda nemhuri yeBheteri rekuUnited States. * Zvinosuwisa kuti pashure pokunge tava nemakore mana tichishandapo, Elias akashaya. Kunyange zvazvo ndakanga ndava chirikadzi ndakaramba ndichishanda paBheteri, uye izvi zvaindibatsira kuramba ndakaisa pfungwa dzangu pane chimwe chinhu uye zvaindinyaradza.
Muna 2006 ndakaroorwa naRichard Eldred uyo anoshandawo paBheteri. Nanhasi ini naRichard tichiri kunakidzwa nekushanda paBheteri. Sezvo ndava kuziva chokwadi pamusoro paMwari, ndinonyatsoona kuti ndakawana mhinduro dzemibvunzo yandaitsvaga uye ndava nechinangwa muupenyu. Zvose izvi zvakatanga nemibvunzo mitatu yandakabvunzwa nemusikana wechidiki.
^ ndima 16 Musikana uyu nevatevedzani vake vakabatsira vadzidzisi vavo vashanu kudzidza Bhaibheri uye kutanga kushumira Jehovha.
^ ndima 18 “Bheteri” ishoko rinoreva kuti “Imba yaMwari.” Zvapupu zvaJehovha zvinodana mahofisi azvo ari munyika yose kuti “Bheteri.” (Genesisi 28:17, 19) Vanhu vanoshanda paBheteri vanoita mabasa akasiyana-siyana anotsigira basa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha rokudzidzisa vanhu.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mibvunzo Mitatu Yakachinja Upenyu Hwangu